एक महिलाले पैसा दिएर श्रीमान खरीद गरिन् भन्दा पत्याउँनुहुन्छ ? – live 60media
एक महिलाले पैसा दिएर श्रीमान खरीद गरिन् भन्दा पत्याउँनुहुन्छ ?
काठमाडौं । एक महिलाले पैसा दिएर श्रीमान खरीद गरिन् भन्दा पत्याउँनुहुन्छ ? सुन्दा पनि अच्चम लाग्ने घटना रुसको मस्कोमा भएको छ । त्यहाँ एक महिलाले ब्रीफकेससँग विवाह गरेको कुरा बाहिर आएपछि दुनियाँ हैरान भएको छ । २४ वर्षीया रेन गोर्डन नर्सरी स्कूलकी शिक्षिका हुन् । उनी प्रायः निर्जीव चीजहरूको साथ प्रेम गर्छन् ।
प्रेम मात्र होईन, त्यस्ता वस्तुहरुसँग आकर्षित हुन्छिन् र सम्बन्ध कायम गर्छिन् । यो बीचमा उनको आकर्षणको कारण, उनी एक ब्रीफकेसको साथ प्रेममा परिन् । रेनले पहिलो पटक पाँच वर्ष पहिले आफ्नो ब्रीफकेस गिदोनलाई पसलमा फेला पारेकी थिइन् । जब उनी किनमेल गर्न गइन्, तब उनी ब्रीफकेसतर्फ आकर्षित भइन् ।
उनले ब्रीफकेसबाट आफ्नो आँखा हटाउन सकिनन् र अन्त्यमा किनेर ल्याउनु पर्यो । उनको जवानीमा, रेन धेरै चीजहरूमा आकर्षित हुने गर्थिन् । तर उनले ती चीजहरूको बारेमा कसैलाई भन्ने गरेकी थिइनन् । किनभने त्यस्तो कुराहरु गर्दा उनलाई सबैले पागल ठान्छन् भन्ने डर उनीमा थियो । तर अब जब उनी हुर्किईन्, उनले मानिसहरूलाई उनको ब्रीफकेसको बारेमा र त्यो सँग रहेको प्रेमको बारेमा बताउँछिन् ।
उनका अनुसार उनको त्यो कदमले निर्जीव वस्तुहरूलाई माया गर्ने भावना बढाउँदछ । उनी भन्छिन्, ‘जब म गिदोनलाई देख्छु, मेरो मुटु एकछिनको लागि रोकिन्छ । मलाई उनको चाँदी मनपर्छ, ऐना प्रतिबिम्ब अत्यन्तै मनपर्छ । मान्छेहरु मेरो भावना बुझ्दैनन् । उनीहरूलाई लाग्छ म पागल हुँ ।’ ब्रीफकेस खरीद गरेपछि रेन गएर यसलाई लिएर पढ्न र पढाउन जाने गर्थिन् । यस वर्ष जूनमा, उनले गिदोनसँग विवाह गरेकी हुन् ।
परिवार र साथीहरू उनको विवाह मा शामिल थिए । जानकारी अनुसार त्यो विवाह आधिकारिक विवाह थिएन तर रेन खुसी छन् कि गिदोनसँग उसको सम्बन्ध बढ्यो । रेन ब्रीफकेससँग ३ देखि ४ घण्टा निरन्तर कुरा गर्न सक्छिन् ।
रेनले एक अन्तर्वार्तामा २०१७ मा उनी एक पुरुषसँग सम्बन्धमा भएको खुलाएकी छिन् । तर त्यो सम्बन्ध २ वर्ष मात्र चलेको थियो । त्यसपछि उनले मैले ब्रीफकेस र व्यक्ति बिच छनौट गर्न थालेको जनाएकी छिन् । व्यक्ति र ब्रीफकेस आकाश पातालको फरक रहेको उनको दावी छ ।
← मानिसहरू किन नङ टोक्ने गर्छन् ? यस्ताे छ कारण !!!
भर्खरै हेर्नुहोस झाडीमा ४ जनाले १ घन्टा सम्म कर’णी गर्ने दोशी पत्ता लाग्दै बालिकाको अब्स्था यस्तो छ, (हेर्नुस् भिडियो) →